Olee otú Jiri Your iPhone ka Were HDR Photos & Atụmatụ
HDR photos, ma ọ bụ ndị weere na High Dynamic nso, bụ nnọọ mma photos na-ekwe ka foto weghara oge na ọbụna karị ịma mma. HDR foto na-enye ohere ma na-egbuke egbuke akụkụ na iche na-ekwesị kpughere. Gịnị omenala na-eme mgbe ewere photos, karịsịa mgbe e nwere darker ụlọ megide a chawapụrụ ndabere, bụ na ụlọ ga-iyi fọrọ nke nta nwa. Ezie na nke a nwere ike iyi ka ihe na-akpali mmetụta, anyị nwere ike ghara chọrọ nke a mgbe na-ewere photos. Mgbe na-ewere photos, anyị na-atụ anya na nkọwa na ma na-egbuke egbuke ebe na iche onyinyo ga-hụrụ na ikwu doo anya.
Na-ewere HDR photos na gị iPhone nwere ike mere na iji na-ngwa HDR nhọrọ. N'ihi na nke ukwuu nso nke zuru ezu abuana ke ewere ihe HDR foto, Otú ọ dị, ọ dị mkpa iburu n'uche na ọ ga-ewe ubé ogologo oge na-HDR foto karịa a ndị na-abụghị HDR otu. Isiokwu a na-ekpuchi 2 akụkụ, na-enyere ị na-elu àgwà HDR photos na gị iPhone:
Part 1. Olee otú iji Tụgharịa na HDR na igwefoto na iPhone
Part 2. Atụmatụ & Aghụghọ Wee High Quality HDR Photos
Ị ga-ahụ a na ihuenyo na anya dị ka nke a mgbe tụgharịa saidwees:
Si ebe a, ị ga-a di na nwunye nke nhọrọ. Ị nwere ike okporo anya ma ọ bụ na, n'ihi na EBIDO. Nke a-enye gị ohere evenly akwado ụzọ mmiri nke gị ihe oyiyi egosi; ka ihe atụ, i nwere ike na-achọghị ukwuu ohere gburugburu gị Central ogugu nke gị ihe oyiyi.
Ọzọ ihe, ị ga-enwe ike ịgbanwee na HDR ọrụ na gị igwefoto. Nke a bụ ebe ị ga-enwe ike amalite na-ewere ihe nuanced foto na HDR ihe oyiyi na-mara maka. Nanị enweta ebe ọ na-ekwu "HDR Off" nakwa na ga Toggle nhọrọ "HDR On."
1) Gaa Ntọala> Photos> n'aka na nhọrọ na-Nọgidenụ Nkịtị Photos:　Mgbe ụfọdụ HDR photos na-adịghị mma karịa nkịtị n'anya. Ọ bụ ya mere i nwere ike mkpa agbanye "Nọgidenụ Nkịtị Photos". Ị nwere ike ugbua họrọ nhọrọ na-etinye HDR On, ma ihe n'ezie na-eme bụ na gị na iPhone ga-azọpụta photos atọ dị iche iche exposures. Iji na-"nkịtị" photos - photos na ikpughe na anyị na-eji ịhụ mgbe ọ bụghị na-ewere foto na HDR mode - mkpa ka ị na-aga n'ime gị ntọala ma hụ na nhọrọ na-ejikari kpughere photos bụ on. Ozugbo i nwere HDR set, ọ ga-anọgide na otú ahụ ruo mgbe ị na-aga site na usoro nke na-agbanwe ya azụ "nkịtị" photos.
2) Pịa iji Kpughee na olileanya adịghịzi Area nke Photo: Onye ọ bụla na-adịbeghị anya e oyiyi na ihe iPhone yiri maara na "Pịa iji Lekwasị anya" atụmatụ, ma ihe ọtụtụ agaghị aghọta bụ na nke a mma na-akpaghị aka adjusts ikpughe nke ngalaba nke foto na-ahụ anya. Site na iji nke a "Kpatụ na-elekwasị anya" atụmatụ, ọrụ na-na-akpaghị aka n'ịgbanwe ekpughepụru, karịsịa nke ebe nke ihe oyiyi na-ahụ anya. A na-enyere welie HDR arụmọrụ on iPhones.
Ọrụ nwere ike ịhụ ihe na anya dị ka oyiyi n'okpuru mgbe eji "Pịa iji Lekwasị anya."
3) na-aghọta na-emeli nke iPhone HDR: The eziokwu na iPhone ugbu a, nwere HDR nhọrọ bụ mmasị. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ịghọta na iPhone bụ naanị ihe mmadụ na ókè irè nke na ọ na-eji HDR nhọrọ. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na gị isiokwu bụ na o yiri ịkwaga, ma ọ bụ na ị chọrọ oyiyi na ike iche, ị ga-achọghị na-ihe oyiyi na HDR nhọrọ.
Ọ bụrụ na ị na-eme dị ka ewere foto ke akwa ike nso, ọ dị mkpa na-eme, omume, na-eme. E nwere mgbe ụfọdụ Atụmatụ iburu n'uche mgbe eme HDR foto:
-Ka: Ọ bụghị nanị na kwesịrị isiokwu nke foto gị na-ka, ma ọ dịkwa gị mkpa iji hụ na ị na-iPhone ka. Ọ na-ewe obere oge ka ​​na-HDR foto karịa a ọkọlọtọ foto, otú ebe niile dara jụụ bụ isi.
Nwee obi ike: Lee maka mara mma odida obodo mgbe anyanwụ dara ma ọ bụ usiahautịn. Lee maka akpali gbara na inyoghi inyoghi ndapụta. Na nkenke, anya maka ihe ndị na-enwetaghị gị anya ka ị ghara chere banyere foto nke mbụ.
Họrọ otu ikpughe mgbe: Dị ka e kwuru na mbụ, ị ga-ahụ na ọ bụghị naanị "Pịa iji Lekwasị anya" ọrụ ị na-ahọrọ otu na-elekwasị anya mgbe, ọ na-arụ ọrụ maka-egosi otú mee ka gị ikpughe.
Atụla egwu nke ndị ọzọ na HDR ngwa: ngwa ọdịnala dị ka ProHDR na iCamera HDR na-ma dị na App Echekwala na-arụ ọrụ nke ọma na ime HDR ike na gị na iPhone.
HDR foto nwere ike ịbụ oké ụzọ na-enye gị mara mma foto na ị chọrọ, ịmara na iPhones nwere HDR ikike na-otu ugboro na-ekewaghị ekewa purview nke handheld ese foto, anyị pụrụ ịghọ ọkà foto na-eji HDR ngwa ọdịnala na HDR arụmọrụ na iPhone.
Guide nke 5 ngwa ibudata free music on iPhone / iPod / iPad
otú nyefee foto site na iphone ka iphone
4 Ụzọ nyefee iPhone Igwefoto Roll ka PC / Mac
Olee otú Hichapụ Videos si iPhone (iPhone 5s na iPhone 5c gụnyere)
> Resource> iPhone> Olee otú Jiri Your iPhone ka Were HDR Photos